Maamulka Degmada Dharkeynleey ee Gobolka Banaadir ayaa ku amray dadweynaha iyo ganacsatada in ay bixiyaan lacag u dhexeysa $1,000-$50,000, taas oo culays ku noqatay shirkaha ganacsiga iyo dadwaynaha kala sida ay Axadle u sheegeen dadka deegaanka.
Sida ay Muujinayaan documentiyo ay aragtay Axadle dad weynaha iyo shirkaha ganacsiga ayaa lagu armaray in ay bixiyaan lacago u dhexeeya $1,000-$50,000,waxaana lacagtaasi lagu sheegay in lagu dhisayo wadada laamiga ah ee dhexmarta degmada Dharkenlay ee Gobolka Banaadir.
“Shirkadaha Ganacsiga sida kuwa isgaarsiinta, Xawaaladaha & Bankiyada xafiisyada ku leh degmada waxaa la dul dhigay lacago u dhaxeeya min $10,000-50,000” ayuu Axadle u sheegay mid ka mid ah ganacsatada degmada oo intaasi ku daray in maamulku ugu hanjabay in la xirayo goobahooda ganacsiga hadii aysan bixin lagacaga laga doodanayo.
Qaar ka mid ah masuuliyiinta shirkadahaas oo la kulmay Gudoomiyaha Degmada ayaa u sheegay Axadle in gudoomiyuhu ku wargeliyay in amarkaan uu ka soo baxay dowlada hoose ee Xamar & maamulka Gobalka Benaadir isla markaana ay amar u haystaan cidii diida lacagtaan in laga xirayo goobaha ganacsiga halka guryahana loo sheegay in Dowladdu la wareegayso.
“Intaas waxaa dheer in si joogta ah oo sanadla ah lacagta canshuurta Guryaha looga qaado lacag u dhaxaysa min 60$ ilaa 300$ oo hal beeg looga dhigaya qaab dhismeedka guriga & Caborkiisa” ayuu hadalkiisa raaciyay.
Mudo intee la eg ayaa loo qabtay dadka deegaanka in ay ku bixiyaan lacagta?
Sida ay Axadle u xaqiijiyeen qaar ka mid ah shirkahada ganacsiga ku leh degmada Dharkinlay ee gobolka Banaadir dadka deegaanka ayaa lagu amray in ay lacagta ku bixiyaan mudo 10 maalin ah waxa ayna ka cabanayaan lacagta oo ku badan iyo waqtiga oo ku yar.
“Inta badan waxaa shalay albaabada la isugu dhuftay xarumah shirkadaha ganacsiga ay ku leeyihii degmada ka dib markii lacagihii la dul dhigay ay ku bixinwaayeen mudadii loo qabtey oo 10 cisho aheyd, iyada oo hooyooyin da’ ah oo xanuunsanaya laga soo kaxeeyay xaafadahooda lana geeyay xarunta degmada laguna shardiyay in ay bixiyaan lacagaha si ay dib ugu laabtaan guryahooda taas oo runtii wax lala yaabo nagu noqatay ayaan dowladda ka rabnaa in ay wax ka qabato “ ayuu Axadle u sheegay mid ka mid ah ganacsata degmada Dharkinlay ee gobolka Banaadir.
“Waxaan ka mid ahay shacabka dagan dagmada dharkenlay gaar ahaan saldhiga Galbed iyo naxawigisa waxa Noola keenay warqado ay ku qoranyihiin lacago naloo sheegay in lagu dhisayo laamiga lacagahaas warqadaha ku qoran ma awoodno gudomiyaha dagmada wan la hadalnay wuxu dhahay bixiya ama xabsi ayaan idin galinaa gurigana dowlada la waregeyso runtii walwal badan ayaan qabnaa” ayuu Axadle u sheegay mid ka mid ah dadka degan xaafada ku dhaw saldhiga Galbeed ee magaaladda Muqdisho.
“Warqada guriyaha Iyo goobaha ganacsiga loo qeybiyay saldhiga galbed iyo xafadaha u dhaw ila 5 jid guriyaha waa 1kun , 2kun ila 3kun dollar goobaha gacansiga 5kun iyo wixi kabadan “ ayuu hadalkiisa raaciyay.
“Arintaas wa bililiqo iyo baad dowlada iyo maamulka gobolka banadir hanaga qabtan mamulka saldhiga galbed” ayuu hadalkiisa ku soo xiray.
Waa maxay sababta maamulka Degmada Dharkeynleey ee Gobolka Benaadir uga amray dadweynaha iyo ganacsiga in ay bixiyaan lacag u dhexeysa $1,000-$50,000?